जुत्ताभित्र कार ! :: Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Audio, Video, Nepali Model, Actor, Actores, Interview
जुत्ताभित्र कार !
मान्छे अरुभन्दा केही अलग र नयाँ कुरा गरेर देखाउन इच्छुक हुन्छ । इच्छुक नहोस् पनि किन । नयाँ कुरा गरेपछि ऊ चर्चाको केन्द्र बन्छ । तर सबैले नयाँ कुरा गर्न कहाँ सक्छन् र ? तर चीनको एक जुत्ता कम्पनीले भने साँच्चीकै नयाँ र अनौठो काम गरेको छ ।
यो जुत्ता कम्पनीले विश्वमा सबैभन्दा बलियो जुत्ता उत्पादन गरेर नयाँ काम गरे की भन्ने सोँच्नुहोला । तर होइन, मजबुत जुत्ताका कारण नभई अनौठो जुत्ता बनाएका कारण यो कम्पनीले चर्चा पाएको हो ।
वास्तवमा यो कम्पनीले जुत्तामै इलेक्टि्रक कार बनाइदिएको छ । जो सबैका लागि नौलो कुरा हो । यो जुत्तारुपी इलेक्टि्रक कार एक भयानक जुत्ताकै आकारमा छ, छालाको जुत्ता जस्तै । यो जुत्ता कारमा दुइ जना मान्छे चढ्न सक्छन् । यो प्रतिघण्टा २० किलोमिटर सम्म कुँद्न सक्छ । यो कारमा एउटा ब्याट्री हुन्छ, जसको उर्जाबाट कार चल्छ । ब्याटी चालकको सिटको ठ्याक्कै मुन्तिर राखिएको छ । यो कारको बडी सबै छालाबाट बनाइएको छ र जुत्ता आकारभित्रै सबै अरु मेसिन फिट गरिएको छ ।
यो अनौठो कार जुत्ता निर्माण गर्ने कम्पनी केंग शू का अनुसार यो कारजुत्ता बनाउन ६ महिना लागेको हो । जसको निर्माणका लागि झण्डै ५ लाख रुपैयाँ लागेको छ । यो दश फिट लामो र ३ फिट उचाइको छ । शू नुमा कार नाम दिइएको उक्त कारलाई कम्पनीको प्रबर्धनका लागि बनाइएको हो ।
3 Comments on “जुत्ताभित्र कार !”
krishna sapkota,Bangkok wrote on 13 March, 2013, 6:37
gajab chha baa…
krishna chaudhary wrote on 15 March, 2013, 6:36
yo car ta maile banayeko hoon.
Like or Dislike:08[जवाफ फर्काउनुहोस्]yek pidit nepali Reply: March 19th, 2013 at 11:10 amfacebook ko durupayotg nagara sathi